မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: May 2011
မြန်မာ အဆင့် (၁၄၇) ရရှိ
အင်္ဂလန်မှ မြန်မာပြည်သို. ခရီးသွားကြော်ငြာ တစ်ခု ကိုလေ့လာ ရန်တင်ပြအပ်သည် THE ROAD TO MANDALAY
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ မန္တလေး မြို.သို.သွားမည်. ကြော်ငြာဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းအင်တာနက် စာမျက်နှာ ကိုအောက်ပါလင့်တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို.၏ မူဝါဒမှာ ယခုထက်ပိုသော စီးပွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးဖြစ်ပါသည်။
Join us on this amazing journey that will take you from the vibrant city of Bangkok into the hidden world of Burma, now known as Myanmar.
After exploring bustling Bangkok and fascinating Yangon (formally Rangoon) you will travel to Mandalay to join the ‘Road to Mandalay’ foratruly memorable seven day meander along the mighty Irrawaddy River before spending the final three nights of your adventure at exquisite Inle Lake.
As soon as you set foot in this hauntingly beautiful land you will slip back intoabygone and tranquil era and witnessaway of life that has hardly changed for centuries. During your stay you will catch glimpses of sacred cities, golden pagodas and crimson cloaked monks. You will visit traditional villages, colourful markets, sacred monasteries and schools where the children will capture your hearts.
As you would expect from Orient-Express, the on board experience is one of uncompromising elegance. All of the cabins are beautifully designed, with air-conditioning and en-suite facilities. On deck there isaswimming pool and comfortable, shaded seating. The lounges and bars are perfect for enjoying afternoon tea orasunset drink and the dining isaconstant treat with the menu showcasing the finest gourmet Eastern and Western delicacies.
All of this combined withapre-cruise stay at the world renown Mandarin Oriental, Bangkok and the Governor’s Residence in Rangoon plusapost cruise stay at the Inle Princess Resort makes thisatravel experience that will be hard to resist and one that will never be forgotten.
Friday 30th September: Overnight flight from London to Bangkok.
Saturday 1st October: Arrive Bangkok and transfer to the Mandarin Oriental Hotel foratwo night stay.
Sunday 2nd October: Morning city tour which includes visits to the Grand Palace and the Temple of the Emerald Buddha.
Monday 3rd October: Fly from Bangkok to Yangon (Rangoon) and transfer to The Governor’s Residence foratwo night stay.
After settling in you will visit the key sights of Yangon’s city centre with its magical colonial buildings, before ending your day enjoying the sunset at the spectacular Buddhist centerpiece, the Shwedagon Pagoda. Dinner at leisure either at your hotel or in one of the many restaurants in Yangon.
Tuesday 4th October: After breakfast at the hotel, the day is yours to enjoy at leisure. Lunch and dinner by your own arrangement.
Wednesday 5th October: Morning flight from Yangon to Mandalay. On arrival transfer to the Road To Mandalay berthed on the Ayeyarwady (Irrawaddy) River at Shwe Kyet Yet. After lunch, enjoyaguided tour of the key sights of Mandalay regarded as the centre of Burmese culture and Buddhist learning. Return to Road To Mandalay stopping enroute to admire the sunset over the river.
Thursday 6th October: After an early breakfast visitalocal village forawalking tour. This traditional Burmese village gives you the opportunity to discover the Burmese way of life first hand - from farming and handicrafts to spirit houses and tea-shops. The ship gets underway mid morning and begins its journey south. The rest of the day is spent relaxing on board observing the fascinating local river life from the top deck. An on board guide lectures on the Myanmar way of life.
Friday 7th October: The ship arrives at Bagan where over 2,000 temples and pagodas are scattered over an awe-inspiring plain beside the river. A guided orientation tour introduces you to the most important temples. After lunch you may rejoin the guide to visit the inside of some of the more significant pagodas. Alternatively, you can hireabicycle or horse-drawn cart and explore this fascinating area on your own. Late afternoon the guide takes you to watch the sun setting overafield of glowing pagodas by the river.
Saturday 8th October: A full day excursion to Mount Popa,anational park and believed to be the sacred home of powerful ‘Nats’ (spirits). On top ofarocky crag isapicturesque complex of monasteries, pagodas and shrines which can be reached viaawinding, covered walkway. Lunch is taken at the Mount Popa Resort.
Sunday 9th October: After breakfast join the guide to explore some of Bagan’s local markets selling wood carvings, fabrics, longis and rattan goods. See Myanmar’s famous lacquerware being made. Alternatively, you can hireabicycle or horse-drawn cart and explore this enchanting area on your own. Mid-morning, the ship sets sail for Mandalay.
Monday 10th October: Continue sailing up the river until Road To Mandalay arrives at the little Burmese village of Shwe Kyet Yet in the early afternoon. After lunch enjoy an excursion to Sagaing considered to be the living centre of the Buddhist faith in Burma and famous for its silversmiths who still work in much the same way as their ancestors did.
Tuesday 11th October: Visit Maymyo,acolonial hill station set high in the mountains. Soak up the atmosphere with its cool climate, English style houses, colourful market and beautiful botanic gardens. A typical Shan lunch is taken atacolonial house. Return to the ship forafinal dinner on board.
Wednesday 12th October: After an early breakfast, you are transferred to Mandalay’s airport for your onward flight to Inle Lake. This exquisite stretch of water is known for its calm beauty, colourful festivals and the ancient traditions of its inhabitants. On arrival at Inle Lake you will board your own local boat to take you to the Inle Princess Resort. In the afternoon enjoy an excursion to the picturesque ruins of Indaing on the west bank which is the ideal time of day to experience this magical spot.
Thursday 13th October: Enjoy an unforgettable full day boat trip on Inle Lake -aphotographer’s dream. Witness its calm waters dotted with floating vegetation and fishing canoes, to scenic high hills providing the perfect backdrop. See the lake’s unique “leg rowers” - the Intha people, visit Nga Phe Kyaung Monastery, one of the lake’s most historic religious buildings, famous for its “jumping cats” and see silk weaving on wooden handlooms.
Friday 14th October: Leave your hotel in the morning by boat, followed byatransfer through pine-clad hills to Taunggyi, capital of Southern Shan State andaformer British hill station. Visit the local market andacheroot factory.
Saturday 15th October: In the morning, transfer from Lake Inle to Heho Airport for your flight to Yangon where they may be time foralast minute visit to famous Scott’s Market before flying to Bangkok and then finally London.
Sunday 16th October: Arrive London.
THE ROAD TO MANDALAY SHIP
All cabins aboard the river cruiser are beautifully appointed with air-conditioning, en-suite bathrooms and facilities that guarantee your comfort and add to your pleasure. Twenty-four hour room service is available. The cruiser has an on-deck swimming pool andamagnificent canopied observation deck where you can sit in the shade as you take in the sights. It is alsoadelightful retreat in the cool of the evening. Buffet lunches are served on the Observation Deck or in the restaurant and at dinner attentive waiters serve you delicious courses created by experienced chefs. The air-conditioned Observation Lounge on the main deck isacomfortable retreat during the heat of the day and the focus for the local on board entertainment in the evenings. There isaboutique on board withafull range of gifts designed exclusively for the Road To Mandalay. The atmosphere everywhere on board is informal and friendly.
OUR PRICES from - per person
2 adults sharingasuperior cabin - £4899pp
Upgrade to Deluxe cabin for £500pp
Upgrade to State cabin for £999pp
Single room - £5599pp
ALL OFFERS ARE SUBJECT ARE SUBJECT TO AVAILABILITY AND CAN BE CHANGED OR WITHDRAWN AT ANYTIME AND WITHOUT NOTICE. THESE PRICES WERE CORRECT AS AT 19 APRIL 2011. BOOKING CONDITIONS APPLY
HOLIDAY EXTRAS INFORMATION
* Economy class international and internal flights
•2nights at the Mandarin Oriental, Bangkok onabed and breakfast basis
•2nights at the Governor’s Residence, Rangoon onabed and breakfast basis
•7night cruise on the Road to Mandalay including all meals, soft drinks and house beer
•3nights at the Inle Princess Resort, Inle Lake onafull board basis
• All overseas transfers
• Half day tour in Bangkok
• Half day tour in Rangoon
• All excursions as described on Road to Mandalay and Inle Lake
• Special Bath Travel Cocktail party
• Escorted all the way (subject to minimum numbers)
YOUR ONLY EXTRAS
• Travel insurance- we can arrange cover
• Personal expenditure
Bath Travel believes in the right of the individual to decided whether they should visitacertain country or not.
By visiting Myanmar you will be showing the people they are not forgotten. Everyone you meet there pleads for you to encourage more visitors to help end their isolation and lack of contact with the outside world. This cry has now been taken up by Ang San Suu Kyi who is encouraging tourism to the country to try and end the isolation of its people.
This holiday is organised by Bath Travel in conjunction with Orient-Express and both companies booking conditions apply. A 20% deposit is payable at time of booking.
Prices can be changed at any time without notice. All timings and itineraries are subject to change.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:38 AM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိပါတယ် အင်အယ်ဒီပါတီဝင်များဟာ (၄၀၀) ကျော်ရှိတဲ့ အတွက် အရေအတွက်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ထောင်ကျသူပေါင်းရဲ. ၂၀ % ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများအနေနဲ. အင်အယ်ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပဲမြင်တွေ.နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ အခြားသော ၈၀% ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးလုပ်သူများကို မြင်နိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို.ပါတီခေါင်းဆောင်များနဲ. ကျွန်ုပ်တို. နိုင်ငံရေး အသိုင်း အ၀ိုင်းဟာ အညတရများဖြစ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်၊ ကမ္ဘာကျော် များမဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို. ပါတီဟာ ၈၈ ကျောင်းသား ဟောင်းများနဲ.ဦးဆောင် ဖွဲ.စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ ၁၉၆၂ မှ ယနေ.အထိ ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီမို ကရေစီရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော အညတရ နိုင်ငံရေးသမားမျိုးစုံပါဝင် ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို.ဟာ အညတရတွေဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးပညာကို ကောင်းမွန်စွာလေ့လာထားသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ မြေပေါ် မြေအောက်၊ ထောင်တွင်းထောင်ပြင်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ၊ လူတန်းစား ထက၊် လယ၊် အောက် နေရာအနှံ. နိုင်ငံရေးအတွေ. အကြုံများပြားသူများဖြစ်ကြ ပါတယ်။
စစ်မြေပြင်စကားနဲ.ပြောရရင် ကျွန်ုပ်တို.ဟာ လူသိထင်ရှား ဗိုလ် ချုပ်ကြီးများမဟုတ်ကြပေမဲ့ စစ်ကို ကောင်းစွာတိုက်တတ်တဲ့ ရဲဘော်လေးများ ၊တပ်ကြပ်ကြီးများ၊ စစ်ဗိုလ်ငယ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ စစ်မြေပြင်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို.အင်မတန် ပျော်မွေ.တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
အနိမ့်ဆုံးအဆင့် နိုင်ငံရေးအတွေ.အကြုံအနှစ် ၂၀ ကျော် ရှိသူများ က ဦးဆောင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော် အတွေ. အကြုံရှိ Thinktank များပါဝင်ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခု ၁၉၇၄/၇၅ ခု ၁၉၈၈ ခု ယခု ၂၀၁၀ ခု အထိ မျိုးဆက်သစ်မျိုးဆက်ဟောင်းများပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.တင်ပြနေတဲ့မူဝါဒ သဘောထားများဟာ ဘယ်တုန်းက မှ ရေပန်းမစားခဲ့ပါ၊ သို.သော်လည်း အမှန်တရားများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို. ရဲ့ လေ့လာမှု၊ ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့ကိုယ် ပိုင်အတွေ.အကြုံများနဲ. ချမှတ်တဲ့မူဝါဒများနဲ. ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်း ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ဟာ ကျော်ကြားသူနိုင်ငံရေးသမားများက ပုတ်ခတ်သလို ရန်သူ.လူများမဟုတ်ကြပါ၊ စစ်အစိုးရအကြိုက်လုပ်သူ များ မဟုတ်ကြပါ၊ အသိဥာဏ်မဲ့များမဟုတ်ကြပါ၊ ဖေါက်ပြန်ရေးသမား များမဟုတ်ကြပါ၊ အချောင်သမားများမဟုတ်ကြပါ၊ အင်ဂျီအိုမှ လက်ဖြန်.တောင်းနေသူများမဟုတ်ကြပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တရားကို ရဲဝံ့စွာ တင်ပြနေတဲ့ မျိုးချစ်နိုင်ငံရေးသမား စစ်စစ်များဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ကို လွတ်လပ်စွာဝေဖန်နိုင်ရန် comment box များထားရှိပါတယ်။ ဆင်ဆာမလုပ်ပါ။ ပြည်သူအများရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက် များ ရေးသားပေးပို.လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့မူဝါဒကို လူကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးလိုပါကလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ဟာ မည်သူကိုမှပုတ်ခတ်နေမည်မဟုတ်ပါ။ အစိုးရကို သာမက အတိုက်အခံများ အပါဝင် မီဒီယာများကိုပါ ဝေဖန်မှုပြုလုပ်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ နဲ. အဖွဲ.အစည်း မျိုးစုံတို.ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့မူဝါဒများကိုတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို.ဟာ ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့မူဝါဒများကို အာမခံသူများဖြစ်ကြ ပါတယ်။ ရဲရဲတောက်မူဝါဒများကို ကျွန်ုပ်တို.မတင်ပြပါ၊ ပြည်သူကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို.ကျွန်ုပ်တို. မတောင်းဆိုပါ။ သို.သော်လည်း ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မည်သို.ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုတာ ကောင်းစွာနားလည် သူများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို.ရဲ့ဘလောက်စာမျက်နှာမှာ အစစ်အမှန်နိုင်ငံရေး ကိုသာတင်ပြပါတယ် ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:26 AM2comments Links to this post
နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများမလုပ်သင့်ပါ
မြန်မာပြည်တွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီသော် ၎င်း အဖွဲ.စည်းများဖြင့်သော် ၎င်း ရှိခဲ့သည်။ ထိုလူမှုရေး လုပ်ငန်းလုပ်သူတို.မှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ နှင့်လူမှုရေးလုပ် ငန်းများကိုသီးခြားစီဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့၏။
ယခု မြန်မာပြည်တွင် လူမှုရေးလုပ်သူ လူငယ်အချို. နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီ အချို.တို.မှာ NGO ဆန်ဆန် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိကြ၏။ နာရေးကူညီမှုအသင်းများ၊ အခမဲ့ဆေးကုသခန်းများအား စစ်အစိုးရ၏ နှောက်ယှက်မှုကို မခံရခြင်းမှာ အခြားသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများမပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။
လူမှုရေး သက်သက်လုပ်လိုသော မျိုးချစ် လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်လို သူများက ၎င်း တို.အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက် သည်ဟု အာဏာပိုင် များကထင်မြင်ပြီး လာရောက်ဖမ်းဆီးမှာကို စိုးရိမ်ကြောင်း ဖွင့်ပြောကြ၏။ ၎င်း တို.အနေဖြင့် ဆင်းရဲသားပြည်သူများကို သဒ္ဒါစိတ်သက်သက်ဖြင့် လှူဒါန်းလိုကြောင်း အာဏာပိုင် များနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် မှုများ မဖြစ်စေလို၍ စေတနာရှိသော်လည်း ခပ်အေးအေးသာ နေကြောင်း ရိုးသားစွာတင်ပြကြလာကြ၏။
နိုင်ငံရေးတစ်ပိုင်း စာသင်ကျောင်းတစ်ပိုင်းလုပ်သူ လူကြီးလူငယ်များ အနေဖြင့် အလုပ်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့် အာဏာ ပိုင်များ နှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု များကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော ပြည်သူများ အားပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးတစ်ပိုင်း လူမှုရေးတစ်ပိုင်း လုပ်သူများအား အလုပ်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကို ဖေါ်ဆောင်ကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို.မှတိုက်တွန်းအပ်သည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:21 PM3comments Links to this post
NLD ၏ ငွေချေးလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ် ကန်.ကွက်သွားမည်
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်၏ အလုပ်မှာ ပြည်သူတို. အားငွေထုတ်ချေး ခြင်း ဟုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို. ပြင်းထန်စွာ ကန်. ကွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူအားဆင်းရဲတွင်းမှလွတ် မြောက်စေချင်လျှင်ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်စေသော မူဝါဒ များကိုချမှတ်ရမည်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားပိတ်ဆို.မှု ဖွင့်လှစ်ပေး စေဖို. နိုင်ငံတကာ ကိုတိုက်တွန်းရမည်.အစား ငွေချေးဖို. လုပ်ခြင်းက ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြသနာများသာ လျှင်ပေါ်ပေါက်လာဖို.ရှိ၏။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်၏ အလုပ်မှာ တိုင်းပြည်အာဏာရရှိရေးကိုသာ ပထမဆုံးကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို. မှသာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်၏။ အဂတိလိုက်စားမှုမရှိပဲ ရိုးသားစွာ လုပ်ဆောင်ပါမှ အနဲ ဆုံး ဆယ်စုနှစ် တစ်စု ၊ နှစ်စုခန်.လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်ကို ငွေထုပ်ချေးခြင်းဖြင့် ပြေလည်စေ မည်မဟုတ်ပါ။
အင်အယ်ဒီ ၏ မဆီလျှော်သော လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူအများ နှင့် ပညာရှင်များမှလည်း ၀ိုင်းဝန်း ကန်.ကွက် ကြပါရန်ကျွန်ုပ်တို.မှ ပန်ကြားလိုပါသည်။ အင်အယ်ဒီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲကို ဆန်.ကျင်သော မှားယွင်းသည်. မူဝါဒများကို ဖါထေးနေခြင်းသာလျှင်ဖြစ်၏။
ယနေ.အင်အယ်ဒီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ပြည်သူများ ဆင်းရဲတွင်းမှလွတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အင်အယ်ဒီ မှ လုပ်ဆောင်သောအလုပ်များကို ပြည်သူတို.က ထာဝရအမှန်တရားအဖြစ် လက်ခံနေလျှင် တိုင်းပြည် ၏ နိုင်ငံရေးပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးကြန်.ကြာစေမည်ဖြစ်၏။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:13 AM6comments Links to this post
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွင် မြန်မာက ထိပ်ဆုံးမှရှိနေသည်။ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုတွင် အတားအဆီးက လာဘ် ပေးလာဘ်ယူသာဖြစ်၏။ ချစားမှုများသော တိုင်းပြည်ကို ဘယ်စီးပွားရေးပညာရှင်ကမှ ကယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ချစား မှု၏ အဓိကလက်သယ်မှာ အစိုးရများသာဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်တွင် လစာ အပြင်ရရှိသော အပိုဝင်ငွေက ဂုဏ်ယူ စရာပင်ဖြစ်နေ၏။ လာဘ်စားနိုင် သောဌာနတွင် အလုပ်ရလျှင်ဂုဏ်ရှိ၏။ လာဘ်စားနိုင်သော ပညာရေးနယ်ပယ်တွင် ပညာ သင်ကြားသူဦးရေလည်းများသည်။ စက်မှုတက်က္ကသိုလ်တွင် မြို.ပြအင်ဂျင်နီယာ သင်ကြားသူများ၏။ အလုပ်ရ လျှင် အောက်ဆိုက်ရသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းလျှောက်သူဦးရေသည်ပင်လျှင် နည်းလှသည်မဟုတ်၊ စစ်ဗိုလ်ဖြစ် လျှင် ချမ်းသာပြီ ရှေ.တန်းမသွားခြင်လျှင် လာဘ်ထိုးလိုက်ရုံသာဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို.မျိုးဆက်တွင် လုပ်သွားရမှာက ဒီမိုကရေစီရေး ပြီးလျှင် လာဘ်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖြစ်၏။ အမျိုးသားရေးအသွင်ဖြင့် လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိဘက သားသမီးကိုလာဘ်စားတာရှက်စရာဖြစ်ကြောင်းသင်ပေး ရမည် ။ ကျောင်းတွင်လည်းသင်ရမည်။ လုပ်ငန်ခွင်တွင်လည်း ရှုံချရမည်။ အစိုးရကလည်း လာဘ်မစားမှဖြစ်မည်။ မီဒီယာ မှလည်း ရဲဝံ့စွာတင်ပြဖို.လို၏။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ.ကြီး၏ တိုင်းပြည်အလိုက်ချစားမှုများကို လေ့လာရန်တင်ပြ ပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:37 AM0comments Links to this post
နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါတီရံပုံငွေ အတွက် စီးပွားရှာမှုများ ကန်.ကွက်သွားမည်
စစ်အာဏာရှင်ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရားဝင်စီးပွားရှာဖွေခွင့်ပေးတာဟာ စီးပွားရှာရင် ပါတီတွင်း သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ၊ ပါတီတွင်း ငွေကြေးအရှုပ်တော် ပုံများပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်မှုမရှိသေးတဲ့ လူ. အဖွဲ.အစည်း တိုင်းဟာ ငွေကြေးနဲ.ပတ်သက်လာရင် အထူးပဲ သတိထားရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် အောင်မြင်စွာနဲ. ရပ် တည်နိုင်ဖို. ဆိုတာ ဆယ် စုနှစ်ပေါင်းများ စွာတည် ဆောက်ယူရ တတ်ပါတယ်။
ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူဟာ ပါတီနာမယ်ခံပြီးရောင်းချတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုနဲ. ကုန်စည်တွေကို ရံပုံငွေ ရရှိရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ၀ယ်ယူအားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့အမြတ်ငွေတွေ ဘယ်ကိုရောက်သွားမှာလည်းဆိုတာကို ပြည် သူက သိချင်မှာပါ။ ဥပမာတင်ပြရရင် ကျားဖြူပါတီရဲ့ စီးပွားရှာဖွေမှု နဲ.ပတ်သက်တဲ့ မူဝါဒ ဖြစ်ပါတယ် အစုရှယ်ရာတွေကို ပြင်ပကိုထုပ်ရောင်းပြီး အမြတ်ရဲ့ ၇၅%ကိုအစုရှင်တွေ ကိုခွဲဝေပေးပြီးကျန်၂၅%ကိုပါတီရံပုံငွေ အ ဖြစ်ရရှိစေမယ်လို.ဖေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူက ရံပုံငွေအဖြစ် ၀ယ်ယူအားပေးတဲ့ အမြတ်ငွေရဲ့ ၇၅ ရာနှုံးကို ရှယ်ရာရှင် တွေကခံစားရမယ်ဆိုတာဟာ အမှန်တော့ ရံပုံငွေဘန်းပြပြီး စီးပွားရှာတာသာဖြစ်ပါတယ်။
အစုရှယ်ရာရှင်တွေဟာ သူတို.အတွက် အကျိုးမရှိရင် ဘယ်အစုရှယ်ရာကိုမှ ၀ယ်ယူမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပိုင်းမှာလည်း မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီး မြုတ်နှံမှုမပါရင် မိမိ စီးပွားလိုသဘောထား ပြီး ဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုလည်း ပါတီရဲ.စီးပွားလုပ်ငန်းဟာ အရှုံးပေါ်ပြီး အရှက်ကွဲ၊ လူထုထောက်ခံမှု ကျဆင်း စတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြသနာနဲ. ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို စစ်အာဏာရှင် အကြိုက်ဖြစ်သွားပါပြီ။
လိုရင်းကတော့ ပါတီနာမည်နဲ. စီးပွားရှာတာဟာ ကောင်းကျိုးကို မဖြစ်စေနိုင်ပဲ ဆိုးကြိုးကိုသာဖြစ်စေ မဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေဟာ မိမိတို.ရဲ့မူဝါဒကို ရိုးသားစွာ တင်ပြပြီး ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံ မှုနဲ.လှုဒန်းတဲ့ရံပုံငွေနဲ.ပဲရပ် တည်သင့်ပါတယ်။ အလွန်ဆုံးလုပ် သင့်တဲ့အလုပ်က ရံပုံငွေပွဲဈေး ရောင်းခြင်း၊ အမှတ်တရ ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း၊ စာအုပ်စာ တမ်းရောင်းချခြင်း အစရှိတဲ့ ရံပုံငွေရရှိရေး လုပ်ငန်းများကို သာ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
တစ်ပိုင်းမှာလည်း ကျွန်ုပ်တို.ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားပါတီများ အနေနဲ. ကျပ်သန်း တစ်ထောင် ရင်းနှီးမြုတ်နှံနိုင်တယ်ဆိုရင် ကြံ.ခိုင်ရေးလိုပါတီမျိုးက ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင်လောက် ရင်းနှီးနိုင်တယ် ဆိုတာသိ ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို. အတွက် လုပ်ငန်းတစ် ခုလောက်ရနိုင်ဖို.ခဲယဉ်းပေမဲ့ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီအတွက် လုပ်ငန်းပေါင်း တစ်ထောင်လောက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
သာဓကအဖြစ် ဦးပိုင်နဲ. မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို. ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြ၀တီဘဏ်၊ မြ၀တီရုပ်သံ စသည်ဖြင့် စစ်တပ် ပိုင်လုပ်ငန်းများဟာ အထူး အခွင့်အရေးများရခဲ့တာကို ပြီး ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂ စုအတွင်း မြင်တွေ.ရပြီးဖြစ်သလို ယခုလည်း ဒီအဖွဲ.အစည်း တွေကပဲ အဓိက စီးပွားတွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတာတွေ.ရမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို. ဟာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးရဲ့ တရားဝင်ရော တရားမ၀င်ရော စီးပွားရှာဖွေမှု အားလုံးကို ဆန်.ကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ လူလယ်လူရှုပ်တွေဟာ စီးပွားလုပ်ဖို.အတွက် ကုမ္ပဏီထောင်တာမျိုးမလုပ်တော့ပဲ နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်ပြီး စီးပွားရှာကြတဲ့ခောတ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 7:50 AM0comments Links to this post
TRAIN TICKET UK
ပြည်ပဂီတနှင့် အခြားသော အနုပညာများ တရားမ ၀င်ကူး ယူခြင်းကို
စီးပွားပိတ်ဆို့မှုဖွင့်လှစ်ရေးကို ( To lift Sanctionsျ)
ဆရာမ။ ။ လူ.ယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် တွေရဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုကိုပြောစမ်းပါ။
တပည့်။ ။ သေနတ်ပါဆရာမ။
နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက် သော ကျွန်ုပ်တို.အယူအဆ
နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်၏ အရင်းအမြစ် တစ်ခု
အဖြစ်ကျွန်ုပ် တို.ကယုံကြည်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ကောင်း
တစ်ရပ်မရှိပဲ တိုင်းပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီမရှိနိုင်၊ နိုင်ငံရေးကို
စိတ်ဝင် စားသောလူသားအရင်းအမြစ်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ
ပေါင်းစပ်မှသာ စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကိုဖေါ်ဆောင်နိုင် မည်ဟုယူဆသည်.အလျှောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်
top online casinos bonus
A Definition Of Democracy
Government With The People
အင်္ဂလန်မှ မြန်မာပြည်သို. ခရီးသွားကြော်ငြာ တစ်ခု ကို...
နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းမျ...
နိုင်ငံရေးပါတီများ ပါတီရံပုံငွေ အတွက် စီးပွားရှာမှု...
NEW TELEPHONE LINE
စီအိုင်အေ သတင်း (WORLD FACTBOOK)
မြန်မာ E-BOOK များဝယ်ရန်
၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၏ စာမျက်နှာ
အလှုငွေဖြင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်၍ မရပါ
ကြံ့ဖွံ.၏ ငွေချေးလုပ်ငန်းများ ကန်.ကွက်သွားမည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပါလီမန်တွင်းနိုင်ငံရေးလုပ်ရန် ကမ္ဘာ့မီဒီယာများ အကြံပြု
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီ
အာဆီယမ်- ဂျပန် အစည်းဝေးရန်ကုန်တွင်စတင်ကျင်းပပြီ
Karean Information Center
၃၁ - သြဂုတ် မျှော်ချင်း
aaaa. Powered by Blogger.